Dekedda xamar oo noqotay astaanta keliya ee maanta utaagan qarankii soomaaliyeed iyo dowladda uganda oo nala yeelatay. | Somalisan.com Home
Dekedda xamar oo noqotay astaanta keliya ee maanta utaagan qarankii soomaaliyeed iyo dowladda uganda oo nala yeelatay.
12/10/2012 5:47:00 Waana sababta ay kumuteysatay inay noqoto astaanta qaranka soomaaleed ee hadda jirta.
Burburkii baahsanaa ee saameeyey qaranimadii soomaaliyeed wuxuu gaaray heer ay xataa muwaadiniinteeni katagaan damqashada dalkooda iyo dadkoodaba.waxaa yaraaday fikirkii ahaa soomaaliweyn.waxaa dabcay xiriirkii walaaltinimo ee kadhexeeyey bulsha weynta soomaaliyeed ee walaalaha ah.calankii buluugga ahaa ayaa marti unoqday ciidamo shisheeye ah.gobolna gobol madifaaci karo,mana rabo inuu difaaco.
Xaaladdu waxay u egtahay qabiil walboow naftaa halkeey qeylo kugeyso.Labadii gobol ee xorta ahaa ayaa uqeybsamay toban aan tashaneyn laakiin loo taliyo.qabiil walba taagtiisay qodaxdii kutagtay.Laakiin ilaah lagama quusto ragna wuu isdhaami doonaa inshaa allaah.
Sida muuqata xataa calankii wuxuu kusoo aruuray meelo kooban oo koonfurta ay,kadib markii uu reer walbaa sameystay mid midabyo leh oo asaga ugaar ah.Balse waxaa xusuus mudan in ay dekaddii xamar weli tahay hanti uu leeyahay qaranka soomaaliyeed maadaama ayada hadda laga biilo dowladda dhexe ,ciidamada qalabka sida iyo baarlabaanka qaranka intaba.
Waana sababta ay kumuteysatay inay noqoto astaanta qaranka soomaaleed ee hadda jirta.
Waxaase ayaan darro noqotay inay hadda soobaxayaan warbixino sheegaya inay dowladda uganda qeybteeda kaqaadato dhaqaalaha kasoo xerooda dekedda ,ayadoo sida lasheegayo qaadato dhaqaalo gaaraya boqolkiiba 25 ilaa 30 boqolkiiba.Qabashada dakhliga dowladda uganda kasoo gala dekedda xamar waxaa uga masuul ah madaxda ciidamadeeda jooga dalka soomaaliya.
Warbixintaan oo ah mid aad isusoo tareysa ayeynu wax kaqornay muddo haatan laga joogo sanad iyo bar.Laakiin ay hadda nagu wehliyaan qaar kamid ah warbaahinta soomaaliyeed weliba kuwooda ugu wanaagsan ee laysku haleyn karo,laakiin aanan ogolaansho kaheysan inaan magacooda halkaan kuxusno.
Arinkaan oo dekedda xamar kadhigaya mid lameel joogta garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo ay shirkadda shisheeyuhu maamusho.Waxaan ayana la iloobi karin inuu dekedda boosaaso maareeye kayahay nin ustaralian ah oo jagadaas usoo magacowday UNDP oo ah hayadda qaramada midoobay uqaabilsan arrimaha soomaaliya.